QuickTime wee ghara inye ọ bụla ụda mgbe playback, karịsịa ma ọ bụrụ na video bụ itinye na koodu na a format na QuickTime ike na-agụ. Kacha doro anya azịza na-akpọ a video na-enweghị audio bụ ego ọ bụrụ na gị QuickTime echichi ka decoded niile video faịlụ.
Ị nwere ike ma idozi nke a site na wụnye-efu codec ma ọ bụ tọghata video n'ime chọrọ QuickTime usoro.
Ihe ndị ọzọ nwere ike ime na ụda agaghị abịa nke gị QuickTime video nwere ike ịbụ ndị na-esonụ:
Faịlụ nwere ike emerụ
'System' ụda-adịghị arụ ọrụ
Na-ezighị ezi ndị ọkà okwu
QuickTime - Ọ dịghị ụda mgbe update
Mgbe emelite QuickTime ọ bụrụ na ọ ka na-adịghị na-egwu ọ bụla ụda, ọ pụrụ ịbụ n'ihi na ochie echichi faịlụ na-ka na-referenced site na ngwa. Nke a ga-eduga ogbenye faịlụ nsụgharị, n'ihi ya na-anọghị nke ụda.
Dozie a, na-eso nzọụkwụ dị ka e n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Mwepụta QuickTime si omume menu.
Nzọụkwụ 2: Site n'elu n'akụkụ aka ekpe, họrọ Dezie menu.
Nzọụkwụ 3: Mgbe ahụ isi Mmasị na pịa QuickTime Mmasị.
Nzọụkwụ 4: Pịa na Audio taabụ.
Nzọụkwụ 5: Mgbe ego na igbe na-ekwu 'Nchekwa mode (waveOut naanị)'.
Nzọụkwụ 6: pịa Mee na mgbe ahụ nso QuickTime na re-ẹkedori ya. Play gị video faịlụ ọzọ a na oge ị ga-enwe ike ige ntị ka ụda dị ka mma.
Ọ dịghị ụda mgbe egwu na-akpọ ihe AVI faịlụ na QuickTime X
Ọtụtụ n'ime ndị ụda metụtara mbipụta na-ada banyere site efu codecs na-adịghị abịa na QuickTime. Na-egwu ihe AVI faịlụ a mgbasa ozi ọkpụkpọ ga nwere niile mkpa codecs. Ka na-anya na otu ndị dị otú ọnọdụ.
Ikpe: m na-agbalịkwa-akpọ ihe na AVI faịlụ, video arụ ọma, ma ụda adịghị pụta. M enyocha niile ngwaike na o yiri ka ha dịkwa mma. Na ihuenyo e nwere ozi na m mkpa ihe ọzọ akụrụngwa dị na DivX website, gịnị ka m na-eme?
A mma ngwọta ga-iji tọghata AVI faịlụ ka a ọzọ dakọtara format dị ka MOV ma ọ bụ MP4-eji ihe AVI ka QuickTime Ntụgharị.
Edozi: converting MOV ka AVI maka Mac na Windows ọrụ
Ẹkedori ngwa (anyị na-eji Wondershare Video Ntụgharị) ibudata ya ebe a
Tinye faịlụ ka-converted site
Na ịpị faịlụ menu> họrọ họrọ mgbasa ozi faịlụ ma chọta ebe media faịlụ ndị. I nwere ike ikpebi ime a ogbe akakabarede ma ọ bụ mara ha otu otu. Iji mee a ogbe akakabarede, ị ga-enyere ndị jikota nhọrọ na ala nke isi interface.
Nzọụkwụ ọzọ bụ iji họrọ mmepụta format si n'elu n'akụkụ aka ekpe wedaa menu, na nke a anyị họrọ MOV.
Ọzọ nhọrọ dị ka ị na-tọghata gị mgbasa ozi.
Ị nwere ike kewaa, akuku, ma ọ bụ ọbụna tinye pụrụ iche utịp ka media.
Mgbe ị na-afọ ojuju na edezi, pịa na tọghatara button
Chere maka omume rụchaa na-egwu gị video.
Ọ dịghị ụda egwu na-akpọ QuickTime on Windows 7
Idozi ụda nke na Windows, ị mkpa ijide n'aka na i nwere QuickTime ọkpụkpọ na-atụ aro ntọala na ebe.
Ileba: My faịlụ ebudatara na-egwuri egwu, ma na-enweghị ụda na m Windows 7 arụnyere PC, amaghị m ihe kpatara ya, enyemaka ọ bụla?
Edozi:-atụ aro ntọala maka windows usoro (XP, Vista na Win 7)
Ọ bụrụ na ị na-ama nwere QuickTime arụnyere, ẹkedori ọkpụkpọ na mgbe ahụ eso ndị a.
Mmasị> QuickTime Mmasị na-esi na QuickTime Mmasị window
Na Audio taabụ: setịpụrụ ọnụego 32 kHz, size ka 16bit, na ọwa stereo
Họrọ nchọgharị taabụ ma kaa 'Play fim na-akpaghị aka' igbe
Pịa na mime bọtịnụ mwube ma na-eme dị ka na-esonụ:
XP: Pịa na ojiji defaults
Vista ma ọ bụ Win 7: ego na .mov, mqt, .qt, .qti na .qtif
Na gụgharia taabụ, họrọ 512 kbps DSL / Cable si dobe ala menu n'okpuru 'gụgharia ọsọ'
On faịlụ ụdị, pịa ojiji defaults button (a menu bụ adịghị na Windows 7)
Họrọ elu taabụ
Na gụgharia ngalaba, họrọ omenala iga, mgbe ahụ, n'ihi na protocol, họrọ HTP, na n'ọdụ ụgbọ mmiri kwesịrị 80
Mgbe ahụ, pịa OK
N'okpuru elu taabụ, na media ngbanwe ngalaba jide n'aka na 'Kwado ngbanwe iji ketara codex' igbe na-enyocha
Pịa OK wee tinye
Ọ dịghị ụda na Firefox QuickTime plugin
QuickTime ọkpụkpọ nwere a plugin na-enyere gị na-ekiri na-ege ntị music on nchọgharị weebụ gị. Ụfọdụ tweaking kwesịrị ime iji mee ka QuickTime na-arụ ọrụ nke ọma ma na-aza niile mgbasa ozi faịlụ dị ka chọrọ.
Firefox agaghị akpọ ụda ma ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime plugins nwere nkwarụ.
Otú e si enyere ma ọ bụ gbanyụọ a nchọgharị plugin
Ego na nchọgharị menu button
Họrọ Add-ons taabụ na-emeghe tinye-na na njikwa taabụ
Site tinye-ons njikwa taabụ, pịa plugins
Họrọ QuickTime n'etiti ndepụta nke plugins
Họrọ 'mgbe rụọ ọrụ' site dropdown menu iji gbanyụọ a plugin
Pịa na mgbe nile rụọ ọrụ re-enyere ndị plugin
Gbanwee otú nchọgharị ejiri media
Ị mkpa iji jide n'aka na ihe nchọgharị ejiri faịlụ ọma mgbe ị mara ya. Ị nwere ike ịgbanwe download edinam oge ọ bụla nchọgharị ga-emepe media.
Naanị faịlụ na-jikọrọ ka QuickTime ọkpụkpọ na-emetụta na nke a.
Olee otú igwu egwu QuickTime Video on Apple TV
> Resource> QuickTime> 4 QuickTime na 'ọ dịghị ụda' ikpe